18 USC § 2257/2257A - Ịhụnanya ụmụ nwoke - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Dabere na Digital Millennium Copyright Act nke 1998 (US Copyright Office), ndị nwe na ndị ọrụ nke
Boyslove.me ga -aza ngwa ngwa maka ebubo ntaramahụhụ nwebisiinka kọọrọ onye ọrụ nwebisiinka Boyslove họpụtara. Biko mara na n'okpuru ngalaba 512 (f) nke DMCA (17 USC § 512 (f)), onye ọ bụla nke kpachapụrụ anya na -akọwahie ihe ahụ ma ọ bụ ọrụ na -emebi nwere ike ịda iwu.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na e depụtaghachiri ọrụ idepụtaghachi gị n'ụzọ mebiri mmebi nwebisiinka, biko nye onye ọrụ nwebisiinka Boyslove ozi ndị a:
Ihe ntinye aka ma obu nke ntinye aka nke onye enyere ikike imechitere onye nwe ikike nke aka ya nke ekwesiri imegide;
Ịchọpụta ọrụ nwebiisinka ekwuola na emebila ya, ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọtụtụ ntaramahụhụ nwebisiinka n'otu saịtị dị n'ịntanetị kpuchie site na otu ọkwa, ndepụta nnọchite anya ụdị ọrụ ndị a;
Nchọpụta nke ihe a na -ekwu na ọ na -emebi ma ọ bụ bụrụ isiokwu nke imebi iwu na nke a ga -ewepụ ma ọ bụ nweta nke a ga -enwe nkwarụ, yana ozi zuru oke zuru oke iji nye Boyslove ohere ịchọta ihe (dị ka URL ma ọ bụ nọmba vidiyo);
Ozi zuru oke zuru oke iji nye Boyslove ohere ịkpọtụrụ gị: aha, adresị, email, akara ekwentị, ọ bụrụ na ọ dị;
Nkwupụta nke ndị na-eme mkpesa nwere nkwenye siri ike na iji ihe eme ihe n'ụzọ a na-eme mkpesa enweghị ikike nwebiisinka, onye nnọchi anya ya, ma ọ bụ iwu; na
Nkwupụta na ozi dị na ngosi ahụ ziri ezi yana, n'okpuru ntaramahụhụ nke ịjụ iyi ụgha, na enyere gị ikike imechitere onye nwe ikike nwere ikike nke ebubo ebubo ịda iwu.
18 USC § 2257/2257A Nkwupụta Ndozi Nchọpụta Nweta.
Boyslove.me abụghị onye na -emepụta ihe na ọdịnaya niile achọtara na webụsaịtị (Boyslove.me). N'ihe gbasara ndekọ dị ka 18 USC § 2257 maka ọdịnaya na ọdịnaya niile achọtara na saịtị a, biko jiri nwayọ duzie arịrịọ gị na saịtị ewepụtara ọdịnaya ahụ.
Boyslove.me abụghị onye na -emepụta ihe ọ bụla na ọdịnaya niile achọtara na webụsaịtị (Boyslove.me) dị ka akọwapụtara site na 18 USC §2257 na 28 CFR 75 ya mere enwere onwe ya pụọ ​​n'ihe edere.
Boyslove.me bụ saịtị ịkekọrịta onyonyo nke na -enye ohere ibugote, ịkekọrịta na ịlele ụdị ọdịnaya dị iche iche nke okenye yana Boyslove.me na -eme ike ya niile site n'ịkwado nrube isi.
Boyslove.me na -agbaso usoro ndị a iji hụ na nnabata:
Na -achọ ka ndị ọrụ niile bụrụ afọ 18 iji bulite foto.
Mgbe ị na -ebugote, onye ọrụ ga -enyocha ọdịnaya; gbaa mbọ hụ na ọ dị afọ 18; gbaa akaebe na ọ na -edobe ndekọ nke ụdị n'ụdị ọdịnaya yana na ha akarịala afọ 18.
Chọpụta na ọdịnaya onye na -ebugo bụ nke onye ọrụ nwere ma ọ bụ ha nwere ikikere n'iwu ka ibugo, bipụta, kerịta ọdịnaya dị n'aka.
Anyị kwenyesiri ike na ụdị niile, ndị na -eme ihe nkiri, ndị na -eme ihe nkiri, na ndị ọzọ nke nọchiri anya ihe ngosi anya mmekọahụ na webụsaịtị a dị afọ 18 ma ọ bụ karịa n'oge okike. Anyị kwenyesiri ike na onye ọ bụla na -emepụta ihe nke ọdịnaya ya gosipụtara na saịtị a na -akwado 18 USC §2257, na weebụsaịtị/s ha.
Boyslove.me na -ekwe nkwa na ọ ga -eme ike ya niile ịchọta na kwụsị foto mkparị ma ọ bụ/vidiyo.
Maka enyemaka ọzọ, biko kpọtụrụ [email protected] nnabata.
Lee maka Manga ndị ọzọ